रन्जनाको लागि रविको अन्तिम शब्द ! संसार छोड्नु अघि रविले यी महिलालाई यस्तो भनेको रहेछिन् (भिडियो सहित) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/रन्जनाको लागि रविको अन्तिम शब्द ! संसार छोड्नु अघि रविले यी महिलालाई यस्तो भनेको रहेछिन् (भिडियो सहित)
रन्जनाको लागि रविको अन्तिम शब्द ! संसार छोड्नु अघि रविले यी महिलालाई यस्तो भनेको रहेछिन् (भिडियो सहित)
चितवनमा घ*टेको रञ्जना मैनाली र उनका श्रीमान रविकान्तको घ*टना अहिले सामाजिक संजालमा निकै चर्चा पाएको छ । आफूलाई भन्दा बढी माया गर्ने श्रीमतीबाट अनपेक्षित जवाफ पाएपछि बिक्षिप्त बनेका रविले कसैको सहारा नपाएपछि जीवनदेखि हार खाएर आ’त्मह’त्या गरेका थिए । उक्त घ*टनाले चर्चा पाईरहेको बेलामा चितवनमा घ*टेको घ*टनाको बारेमा अहिले समाजिक संजालमा अनेक प्रतिक्रियाहरु आउने क्रम जारि छ।
आ’त्मह’त्या गरेका रवि रुवालीमाथि अन्याय भएको र दो*षी रन्जनालाई फाँ*सी दिनुपर्ने माग धेरैले गरेका छन् भने कतिपयले रविलाई नै दोषी देखाएका छन् । उक्त घटनालाई लिएर परिवार र छर-छिमेकीहरुको आफ्नो-आफ्नो धारणा रहेको छ । रंजनाको लागि रविले गरेको समर्पणलाई रन्जनाले नबुझेको र अन्तत: रविले आ*त्माह*त्याको बाटो रोज्न बाध्य भएको बताएका छन् ।
छर- छिमेकले रन्जनालाई धरौटीमा छोड्नु गलत भएको र रविले न्याय पाउने पर्ने जिकिर गरेका छन् । धेरै नेपालीको साझा घटना यसरि आफ्नै छिमेकमा घट्दा रन्जनाले अरु केटासँग लागेर रविलाई आ’त्मह’त्या गर्न बाध्य बनाएको उनीहरुको ठम्याई छ । हेरौं रविले आफ्नी श्रीमती रन्जनाका लागि भनेका अन्तिम शब्द प्रत्यक्षदर्शी छिमेकिको बोलि जस्ताको त्यस्तै भिडियोमा :
५ रुपैयाँमा खाना बेचेको दुई महिनापछि यतिधेरै पैसा बोकेर भावुक हुँदै कुमार मिडियामा, के भयो अचानक यस्तो! (हेर्नुहोस भिडियो)